Numeri 4 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Basa revaKohati (1-20)
Basa revaGeshoni (21-28)
Basa revaMerari (29-33)
Kuverengwa kwavo kwakanyorwa muchidimbu (34-49)
4 Jehovha akazotaura naMozisi naAroni, achiti: 2 “Vanakomana vaKohati+ vanofanira kuverengwa pakati pevanakomana vaRevhi, maererano nemhuri dzavo nedzimba dzemadzibaba avo, 3 vese vane makore 30+ kusvika ku50+ vari muboka rakapiwa basa rekushanda mutende rekusanganira.+ 4 “Iri ndiro basa revanakomana vaKohati mutende rekusanganira.+ Iro chinhu chitsvenetsvene: 5 Aroni nevanakomana vake vachapinda mukati panguva inosimuka vanhu mumusasa, uye vanofanira kubvisa keteni+ rekuvharisa, vofukidza naro areka+ yeChipupuriro. 6 Vachaifukidzazve pamusoro nematehwe akapfava,* voisa jira rebhuruu pamusoro, vopfekera mapango+ ayo ekuitakurisa. 7 “Vachawarirawo jira rebhuruu pamusoro petafura yechingwa chekuratidza,+ voisa madhishi, makapu, ndiro, nemajagi emipiro yezvinwiwa+ pamusoro payo; chingwa chemupiro+ chinogara chiri pairi chinofanira kuramba chiripo. 8 Vachaifukidza nejira dzvuku, voisa chekufukidzisa chematehwe akapfava pamusoro, vozopfekera mapango+ ayo ekuitakurisa. 9 Vachatora jira rebhuruu vofukidza chigadziko chemarambi,+ pamwe nemarambi+ acho, zvekubvisisa tambo yapera kubvira,* zvekuisira madota,+ uye midziyo yese yemafuta inoshandiswa kuti marambi agare achibvira. 10 Vachashandisa chekufukidzisa chematehwe akapfava kuchiputira pamwe nemidziyo yacho yese, vochiisa padanda rekutakurisa. 11 Uye vachawarira jira rebhuruu paatari yegoridhe,+ voifukidza nechekufukidzisa chematehwe akapfava, vopfekera matanda+ ayo ekuitakurisa. 12 Vachabva vatora midziyo+ yese yavanogara vachishumira nayo munzvimbo tsvene voiisa mujira rebhuruu, voifukidza nechekufukidzisa chematehwe akapfava, voiisa padanda rekutakurisa. 13 “Vanofanira kubvisa madota paatari,+ vowarira jira repepuru rakagadzirwa nemvere dzemakwai. 14 Vachaisa pamusoro payo midziyo yayo yese yavanoshandisa pavanoshumira paatari yacho: midziyo yekuisira moto, maforogo, mafoshoro, ndiro, midziyo yese yeatari;+ uye vanofanira kuisa chekufukidzisa chematehwe akapfava pamusoro payo, vopfekera matanda+ ayo ekuitakurisa. 15 “Aroni nevanakomana vake vanofanira kupedza kufukidza nzvimbo tsvene+ nemidziyo yese yenzvimbo tsvene kana musasa wava kutama. Vanakomana vaKohati vachabva vauya kuzozvitakura,+ asi havafaniri kubata nzvimbo tsvene nekuti vakadaro vanofa.+ Kutakura zvinhu izvi ibasa revanakomana vaKohati patende rekusanganira. 16 “Eriyezari+ mwanakomana wemupristi Aroni ndiye anoona nezvemafuta emarambi,+ rusenzi+ inonhuhwirira, mupiro wezviyo* unogara uchipiwa, nemafuta ekuzodza+ nawo. Ndiye anoona nezvetebhenekeri yese nezvese zviri mairi, kusanganisira nzvimbo tsvene nemidziyo yayo.” 17 Jehovha akataurazve naMozisi naAroni, achiti: 18 “Musarega dzinza remhuri dzevaKohati+ richiparadzwa pakati pevaRevhi. 19 Asi vaitirei izvi kuti varambe vari vapenyu, varege kufa pavanoswedera pazvinhu zvitsvenetsvene.+ Aroni nevanakomana vake vachapinda, vopa mumwe nemumwe wavo basa rake nezvaanofanira kutakura. 20 Havafaniri kupinda vachiona zvinhu zvitsvene kunyange kwekanguva, nekuti vakangodaro vanofa.”+ 21 Jehovha akabva ataura naMozisi, achiti: 22 “Vanakomana vaGeshoni+ vanofanira kuverengwa maererano nedzimba dzemadzibaba avo nemhuri dzavo. 23 Unofanira kunyora vese vane makore 30 kusvika ku50 vari muboka rakapiwa basa rekushumira mutende rekusanganira. 24 Iri ndiro basa remhuri dzevaGeshoni uye izvi ndizvo zvavanofanira kutakura:+ 25 Vachatakura machira ematende etebhenekeri,+ tende rekusanganira, chekufukidzisa charo nechekufukidzisa chematehwe akapfava chiri pamusoro paro,+ keteni rinovhara pasuo retende rekusanganira,+ 26 maketeni anorembera echivanze,+ keteni rinovhara pasuo rechivanze+ chakapoteredza tebhenekeri neatari, tambo dzematende acho nemidziyo yacho yese, nezvinhu zvese zvinoshandiswa pabasa racho. Iri ndiro basa ravo. 27 Aroni nevanakomana vake ndivo vatariri vebasa rese uye zvinhu zvinotakurwa nevaGeshoni;+ uchavapa basa rekutakura zvinhu zvese izvi. 28 Iri ndiro basa rinofanira kuitwa nemhuri dzevaGeshoni mutende rekusanganira,+ uye vanenge vachishanda vari pasi paItamari+ mwanakomana wemupristi Aroni. 29 “Kana vari vanakomana vaMerari+ uchavanyora maererano nemhuri dzavo uye nedzimba dzemadzibaba avo. 30 Unofanira kunyora vese vane makore 30 kusvika ku50 vari muboka rakapiwa basa rekushumira mutende rekusanganira. 31 Izvi ndizvo zvavanofanira kutakura+ pabasa ravo ravanoita patende rekusanganira: mafuremu+ etebhenekeri, mbariro+ dzayo, mbiru+ dzayo, zvigadziko zvayo zvine maburi;+ 32 mbiru+ dzakapoteredza chivanze, zvigadziko+ zvadzo, hoko+ dzadzo, netambo dzadzo dzetende pamwe chete nezvekushandisa zvadzo zvese nemabasa ese anobatana neizvi. Uchavapa maererano nemazita avo zvinhu zvavanofanira kutakura. 33 Aya ndiwo mashandiro achaitwa nemhuri dzevanakomana vaMerari+ pavanenge vachishumira vari patende rekusanganira, vari pasi paItamari mwanakomana wemupristi Aroni.”+ 34 Mozisi naAroni nemachinda+ eungano vakabva vanyora vanakomana vevaKohati+ maererano nemhuri dzavo uye nedzimba dzemadzibaba avo, 35 vese vaiva nemakore 30 kusvika ku50 vaiva muboka rakapiwa basa rekushumira patende rekusanganira.+ 36 Vese vakanyorwa maererano nemhuri dzavo vakasvika 2 750.+ 37 Ava ndivo vemhuri dzevaKohati vakanyorwa, vese vaishumira patende rekusanganira. Mozisi naAroni vakavanyora sezvakarayirwa Mozisi naJehovha.+ 38 Vanakomana vaGeshoni+ vakanyorwa maererano nemhuri dzavo uye nedzimba dzemadzibaba avo, 39 vese vaiva nemakore 30 kusvika ku50 vaiva muboka rakapiwa basa rekushumira patende rekusanganira. 40 Vese vakanyorwa maererano nemhuri dzavo uye nedzimba dzemadzibaba avo vakasvika 2 630.+ 41 Aya ndiwo manyorerwo akaitwa mhuri dzevaGeshoni, vese vaya vaishumira patende rekusanganira. Mozisi naAroni vakaita kuti vanyorwe sezvakarayirwa naJehovha.+ 42 Vanakomana vaMerari vakanyorwa maererano nemhuri dzavo uye nedzimba dzemadzibaba avo, 43 vese vaiva nemakore 30 kusvika ku50 vaiva muboka rakapiwa basa rekushumira patende rekusanganira.+ 44 Vese vakanyorwa maererano nemhuri dzavo vakasvika 3 200.+ 45 Uku ndiko kuverengwa kwakaitwa vanakomana vaMerari, vakaverengwa naMozisi naAroni sezvakarayirwa Mozisi naJehovha.+ 46 Mozisi naAroni nemachinda aIsraeri vakaverenga vaRevhi vese ava maererano nemhuri dzavo uye nedzimba dzemadzibaba avo; 47 vaiva nemakore 30 kusvika ku50, uye vese vakapiwa basa rekushumira uye kutakura zvinhu zvine chekuita netende rekusanganira.+ 48 Vanhu vese vakaverengwa vaiva 8 580.+ 49 Vakanyorwa sezvakanga zvataurwa naJehovha achishandisa Mozisi, mumwe nemumwe maererano nebasa rake uye zvaaifanira kutakura; vakanyorwa sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha.
^ Kana kuti “matehwe etahashi.” Tahashi ringangova riri zita rechiHebheru remhuka yemugungwa yakada kufanana neyemurwizi inonzi mbiti asi yakakura kuipfuura.
^ Kana kuti “mbato.” Uyu mudziyo wakaita sechigero kana pinjisi waishandiswa kubvisa tambo inenge yabvira.